Diyopost.com :: विश्वकपमा आज चार खेल हुँदैः स्पेन सहज स्थितिमा, जित्नै पर्ने दबाबमा पोर्चुगल ! विश्वकपमा आज चार खेल हुँदैः स्पेन सहज स्थितिमा, जित्नै पर्ने दबाबमा पोर्चुगल ! - Diyopost.com
विश्वकपमा आज चार खेल हुँदैः स्पेन सहज स्थितिमा, जित्नै पर्ने दबाबमा पोर्चुगल !
काठमाडौँ । विश्वकपमा आज देखी समुह चरणको सबै खेल सकिँदै छ । सबै समुहका सबै टोलीले २–२ खेल खेलिसकेका छन । कुल ६४ खेलमध्य २८ खेल भईसकेको छ भने आजको खेलपछि नकआउट चरणको खेल शूरु हुनेछ । आज हुने खेललाई विशेष रुपमा हेरिएको छ । समुह ए को दुई खेल र समुह बि को दुई खेल गरि कुल चार खेल आज हुनेछन ।
आयोजक टिम रसिया र उरुग्वे बिच हुने खेल खाशै महत्वका रुपमा लिईएको छैन किनभने रसिया र उरुग्वे नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन । आयोजक रुसले पहिलो खेलमा नै साउदी अरबमाथि ५–० गोलअन्तरले जित हाँसिल गरेको थियो भने दोस्रो खेल ईजिप्ट संग ३–१ ले विजयी भएको थियो । अंकतालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको रुस २ खेलमा दुबै जीत दर्ता गर्दै कुल ६ अंक बटुलेको छ ।
आज हुने पहिलो खेल रुस र उरुग्वे बिच हुदैँ छ । अहिले सम्मको यात्रामा रुसले पहिलो बलियो प्रतिद्वन्दीको रुपमा उरुग्वे परेको छ । साउदी अरेविया र ईजिप्ट दुबै कमजोर टिम भएकोले सहज जित निकाल्न सफल भएको रुसलाई आजको खेलले मापन गर्न सक्छ । चर्चित फुटबल क्लब बार्सिलोनाका स्ट्राईकर लुईज स्वारेजले नेतृत्व गरेको उरुग्वे आज हुने खेलमा जित हाँसिल गर्दै समुहको शीर्ष स्थानमा रहने दाउमा रहेको छ । दुई खेल खेलेको उरुग्वेले दुबै खेलमा जीत हाँसिल गर्दै कुल ६ अंक बटुलेको छ । कुल अंकको हिसाबमा रसिया र उरुग्वेको समान अंक रहेतापनि गोलअन्तरको कारणले रसिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आज हुने खेलमा रसियालाई हराउन सके उरुग्वे समुह विजेता बन्ने छ । खेल नेपाली समय अनुसार राति ७ः४५ बजे हुनेछ ।
अर्को खेल सोही समयमा ईजिप्ट र साउदी अरेविया बिच हुनेछ । दुबै टिम समुह चरणबाट बाहिरिए पनि आजको खेल प्रतिष्ठाको लागी मात्रै हुनेछ । पहिलो खेल रसिया संग हारेको साउदी अरबले उरुग्वे संग १–० ले पराजित भएपछि समुह चरणबाट बाहिरिएको हो । त्यस्तै ईजिप्टले उरुग्वे संग १ गोल तथा रसिया संग ३–१ ले हार व्यहोरेको थियो ।
पोर्चुगल र ईरान बिच आज हुने खेललाई मुख्य आकर्षकको रुपमा हेरिएको कारण पोर्चुगललाई आजको खेल जसरी पनि जित्नै पर्ने दवाव रहेको छ । स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को र ईरान गरि चार देश रहेको समुह बि बाट मोरक्को बाहिरिसकेको छ । पोर्चुगल र स्पेन समान चार अंकका साथ क्रमश पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन । एक बराबरी र एक जित सहित पोर्चुगल र स्पेनले समान ४ अंक बटुलेका छन भने १ जित र १ हार गरी कुल ३ अंकका साथ ईरान तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
अंकतालिका अनुसार आज हुने खेलमा पोर्चुगललाई जसरि पनि जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ । ईरान पोर्चुगललाई रोक्ने दाउमा छ भने पोर्चुगल जसरी पनि जित्ने लयमा उत्रिएको छ । शुरुवाती खेलहरुमानै आफ्नो क्षमता राम्रैसंग देखाएका पोर्चुगल स्ट्राईकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजको खेलमा पनि चम्किने दाउमा रहेका छन । आज हुने खेलमा यदी पोर्चुगललाई रोक्न ईरान सफल भयो भने पोर्चुगल नकआउट चरण सम्म जानको लागी अयोग्य हुने छ । ईरानले पोर्चुगललार्य बराबरमा रोक्न सके अन्तिम १६ सम्मको यात्रा तय गर्न सफल हुने छ । स्पेनको हकमा पनि त्यत्ति साह्रो दबाब छैन । मोरक्को समुह चरणबाट नै बाहिरिएको कारणले स्पेनलाई दबाब नपरेको हो । यद्यपी खेलकाे नतिजा जित या बराबरी भएपिन स्पेन अन्तिम १६ मा सहज रूपमा पुग्न सफल हुनेछ। दुई खेल एकै समय राति ११ः४५ मा हुनेछ ।
खुला राष्ट्रिय ब्याड्मिण्टनको तेस्रो संस्करण आजदेखि शुरु !
काठमाडौँ, असोज ३ । ज्येष्ठ ब्याड्मिण्टन एकेडेमीले आयोजना गर्दै आएको ज्येष्ठ खुला राष्ट्रिय ब्याड्मिण्टनको तेस्रो संस्करण आजदेखि शुरु भएको छ ...
एएफसी यू–१६ महिला च्याम्पियनसिपः नेपालले आज फिलिपिन्ससँग भिड्ने !
काठमाडौँ, असोज ३ । एएफसी यू–१६ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र फिलिपिन्स भिड्दैछन् । आगामी वर्ष थाइल्याण्डमा हुने एएफसी यु–१६ ...
एसिया कप क्रिकेटः वंगलादेशसंग नमिठो हार व्यहोर्दै श्रीलङ्का प्रतियोगिताबाट बाहिरियो
अबुधाबी, २ असोज । अफगानिस्तानले एसिया कप क्रिकेटमा पाँच पटक च्याम्पियन भइसकेको श्रीलङ्कालाई सोमबार ९१ रनले पराजित गरेको छ ...
एसिया कप क्रिकेटः आज हङकङ र भारत भिड्दै, हङकङलाई बढी चुनौती !
काठमाडौं, असोज २ । एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज हङकङ र भारतबीच प्रतिष्पर्धा हुँदै छ । दुबैको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा ...
रोनाल्डोविनाको रियल झनै बलियो, छायामा परेका बेल उदाए
काठमाडौं । किस्टियानो रोनालडो रियल मड्रिडमा रहँदासम्म गेराथ बेल लगभग छायामै परेका थिए । यद्यपी यी दुवै खेलाडी सेट पिसका ...